Madaxweyne Siilaanyo Oo Mudada Uu Joogo Dalka Imaraadka Ka Qaybgelaya Kulan Caalmi Ah, Socdaalkii Dalka Kuwait Oo La Hakiyay Iyo Heshiisyada La Filayo In Qalinka Lagu Duugo | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mudada Uu Joogo Dalka Imaraadka Ka Qaybgelaya Kulan Caalmi Ah, Socdaalkii Dalka Kuwait Oo La Hakiyay Iyo Heshiisyada La Filayo In Qalinka Lagu Duugo
Dubai (ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo wefdigii uu hogaaminayay ayaa galabta ka degey dalka Imaaraadka carabta, iyadoo losoo dhoweeyay si heer maamuus qaran ah, waxaana madaxweynaha iyo wefdiga la dejiyay huteelka caanka ah ee
interconnector Abu Dubai. Madaxweyne siilaanyo oo saxaafada u sheegay ka hor intii aanu ka duulin magaalada Berbera ayaa sheegay inuu booqan doono dalalka Kuwait iyo Imaarada Dubai oo uu ka helay martiqaad rasmi ah.
Madaxweynaha Siilaanyo iyo wefdigiisa waxa dalka Imaaraadka ku sugayay Wasiirka Macdanta iyo Biyaha Somaliland Dr. Xuseen Cabdi Ducaale oo dhowaan kasoo laabtay kulan mihiim ah oo uu kaga qaybgalay dalka Britain, wuxuu mudadii uu ku sugnaa dalka Imaraadka kulamo la yeeshay masuuliyiinta Imaraadka ee Hay’ddaha dalkaa ee Korontada iyo Biyaha.
Madaxweyne siilaanyo ayaa sida ay sheegayaan warar u dhuun daloola socdaalkiisa waxa uu Dubai kula kulmi doonaa company Chine ah, kaas oo la filayo inuu heshiis la galo, iyadoo companygaa Chinaha ah la siiyay qandaraaska dhismaha wadada mashruuca corridor ee isku xidhaya dekedda Berbera iyo dalka Ethiopia, kaas oo ujeedadiisu tahay sidii badeecadaha ganacsi ee u gudbaya dalka Ethiopia. Mashruuca Berbera Corridor, waxa kale oo ku jira in la balaadhiyo Dekedda Berbra, kaas oo la filayo in la bilaabo sannadka fooda inagu soo haya ee 2012, iyadoo ay bixinayso kharashka mashruucaa ku baxaya midawga Yurub (EU) , waxaana lagu qiyaasay inay ku baxayso lacag dhan $ 5.4 million oo dollarka maraykanka ah.
Sidoo kale Madaxweyne Siilaanyo waxa la filayaa inuu ka qaybgalo kulan caalami ah oo April 18-19 ka dhacaya Dubai, kaas oo ujeedadiisu tahay sidii xal loogu heli lahaa mushkilada budhcad-badeeda ee gobolka, isla markaana dhaqaalle loogu ururin lahaa wax lagaga qabto dhibaatada Budhacad-badaha Somalia, taas oo dhibaato weyn oo dhinaca dhaqaallaha iyo amaanka ah ku haysa gaadiidka isaga goosha aduunka ee mara marinka gacanka cadmeed iyo gebi ahaanba badweynta India. Kulankaa oo la filayo inay kasoo baxaan qorshayaal wax ka taraya mushkilada budhcad-badeeda , waxa ka qaybgelaya ku dhowaad laba boqol oo qof, kuwaas oo ka socda wasiirada arrimaha debeda ee dalal baddan oo aduunka ah, wakiilo ka socda qaar ka mid ah dawladaha aduunka ee danaynaya sidii wax looga qaban lahaa mushkilada Af-duubka maraakiibta, wakiilo ka socda qaramada midoobay oo iyadu qayb ka ah qabanqaabada shirka . Sidoo kale waxa ka qaybgelya maalqabeeno waaweyn oo ka socda shirkado caalami ah iyo Companyo , taas oo fursad weyn u ah somaliland sida ay sheegtay wakaalada wararka ee dalka Imaraadka oo loo soo gaabiyo WAM. Waxaana lagu wadaa in kulankaa oo isu taga imaraada UAE oo xiligan ah Deked caalami ah, isla markaana noqotay xarun ganacsi oo caalami ah, ku soo bandhigto qorshaha balaadhinta marinka ganacsiga ee badda cas iyo aduunka kale oo ay hada xudun u tahay Dubai.
Dhinaca Madaxweyne Siilaanyo iyo wefdigiisa ayaa booqashadooda labadaa dalka oo laba todobaad qaadanaysa la filayay inay dalka Imaraadka ee Dubai uga sii gudbaan dhinaca dalka Kuwait, halkaas oo sida wararku sheegaan ay kulamo kula yeelan lahaayeen masuuliyiinta dalka Kuwait iyo shirkada shidaalka ee Kuwait Energy Company (KEC), taas la doonayo in lagu wareejiyo baloogyadii ay hore u haysteen labada shirkadood ee shidaalka maraykanka ee Chevron iyo Amoco, kuwaas oo hore samahin dhinaca shidaalka ah uga samayeey Somaliland xiligii nidaamkii milateri ee siyaad Barre sideetanaadkii. Balse dalka ka cararay markii ay dhaqdhaqaaqii SMN ee uu hogaaminayay Madaxweynaha maanta ee Somaliland Axmed Siilaanyo dalka soo galeen.
Laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne Siilaanyo iyo wefdigiisa ay wax iska bedeleen booqashadii dhinaca dalka Kuwait oo ay dib u dhacay, iyadoo ay dawladda Kuwait ku war gelisay wefdiga madaxweynaha inay kulanka booqashadooda dib u riixeen. Sidaa awgeed wararkaa ayaa sheegaya in Madaxweyne Siilaanyo iyo wefdigiisu ku koobnaan doonto waqtigan dalka Imaraadka ee Dubai. markaa ka dibna dalka dib ugu soo laaban doonaan, iyadoo safarka dhinaca dalka Kuwait hakad ku yimi oo xili kale dib loogu dhigay.
Dawlada Kuwait ayaa Somaliland siisay mashruuc &10 million oo dollar ku kacaya oo wax lagaga qabanayo madaarada iyo wadooyinka dalka, waxayna hada qorshaynaysaa inay caawimooyin ka geysato dhinaca horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada Somaliland, taas oo qayb ka ah waxyaabaha Madaxweyne SIilaanyo iyo masuuliyiinta dalka Kuwait doonayeen inay ka wada hadlaan.